हेक्का राख सरकार, डा.केसी हार्ने छैनन्
अभिष्कार चापागार्इं, एमबिबिएस विद्यार्थी
डा गोविन्द केसीको १५ औँपल्ट अनशनबको आज २७ औँ दिन । सोच्नुस् त एकपल्ट, बिहान एक छाक खान नपाउँदा अमिलो पानी पेटभरी, टाउको भारी हुने, रिङ्गटा लाग्ने हुन्छ हामी आम मानिसलाई । तर डा केसी अझै २७ औँ दिनसम्म मुखमा पानीसम्म नपारी सर्वाहराका निम्ति ज्यान दाउमा राखेर बसेका छन्।
एक असल नेपाली, एक असल नागरिक भएर सोचौँ त ! जुन डाक्टर दिनदिनै बिरामी जाँच गरेको भए अहिले महिना दिनको तलब पनि थाप्ने बेला भभयो तर अनि आज आफ्नै जिउको बाजी लगाएर आम नेपाली जनताको मौलिक हकको सुरक्षा र सुनिश्चितता गर्न महिनौं दिन लडिरहेका छन्, यो देशका माफियासँग। काठमाडौंका चिल्ला बाटोमा हिँडने सरकारका आदरणीय महमहिमहरु अन्धो हुनुभएछ जस्तो लाग्छ यो अबस्था देख्दै गर्दा !
देश संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा जाँदै गर्दा करिब एक वर्षयता देशले इतिहासकै बलियो सरकार पाएको छ ! जनप्रतिनीधि निर्मित संविधान पाएको छ । त्यही संविधानको मौलिक हकहरुलाई सुनिश्चित गर्नैका लागि यत्रो लडार्इं किन लड्नु परेको होला ? अहिले हाम्रो दिमागमा नाँचिरहेको प्रश्न हो यो।
गोविन्द केसीका माग उनी आफ्नै लागि होइन । कसैको राजनीतिक मुद्दा हैन !! याद गरुन् यो सार्वभौम नेपालमा आम नेपालीको मौलिक हकका रुपमा संविधानमा स्वास्थ्य सेवा पाउने हक पनि छ !
यो अधिकार प्राप्तिको लागि डा केसीले १५ औँ पटकसम्म अनसन बस्नुपर्ने बिडम्बना छ । यतिबेला पनि डा केसीका माग पूरा भएनन् भने स्वास्थ्यमा समान पहुँचको नारा नारामै सिमित हुनेछन् । उल्टो स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधारणको पहुँच कमजोर हुँदै जानेछ । व्यापार मौलाउने छ।
तर, जनतासँग जोडिएका सत्याग्रहीका मागलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने कुकर्म पनि पार्टीहरुबाट नहोस् । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न डा केसीलाई ढाल नबनाइयोस् । डा केसी आफ्नै लागि हैन, कुनै शक्ति आर्जनको अभिष्टले होइन, हाम्रा लागि अनसन बसेको छन् । हाम्रा सन्ततिका लागि भोकै बसिरहेका छन् । त्यसैले पार्टीको झन्डा उठाएर उनको माग त्यही छायाँमा हराउने वातावरण नबनाइयोस् । समर्थन जरुरी छ, तर, कुनै दलको खोल नओढेर एक नागरिकका रुपमा समर्थन गर्न मेरो अनुरोध छ।
अहिलेसम्मैकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका एजेन्डा हुनुपर्ने डा केसीका माग । तर, उनका माग र उनको आन्दोलन क्रुरता पूर्वक दबाइदैछ । तुहाउन उद्यत हुँदैछ सरकार । डा केसीको आन्दोलन जति लम्बिन्छ, सरकारले त्यति नै बढी क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । त्यति नै धेरै जनविश्वास गुमाउनुपर्ने छ।
हिजो हरेक दलले शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने लक्ष्य सहित जनताका घरदैलो चाहरेका थिए । त्यही आशाले भोट दिएर माननीयज्यूहरु पठाइएका हुन् । तर, जनताको भोट लिएर कुनै व्यापारीप्रति उत्तरदायी हुने विसंगति देखिदैछ । यसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ।
नेपालकै एक मेडिकल कलेमा एमबिबिएस पढिरहेको बिद्यार्थी हुनुुका नाताले डा.केसीका अनवरत अनसनका उपलब्धिबारे हामी जानकार छौं ।अनि , थाहा छ, न्याय, समानता, समाशीका कुरा । त्यसैले अरुका निम्ति आफूलाई मार्न तयार रहने सत्याग्रहीको हार नहुनेमा निश्चि छौं।
किनकी हामीलाई थाहा छ ,सत्यका लागि लड्नेहरु मर्लान् तर कहिल्यै हार्दैनन्।
डा.केसी लगातरको अनसनले आफैं थलिएका छन् । उहाँकै उमेरका कति डाक्टरहरुले जीवन कमाउनमै खर्चिए र अहिले अवकाश प्राप्त गरेर जीवन रमाइलो तरिकाले बताइरहेका छन् । परिवारसँग मोजमस्ति गरिरहेका छन् । तर, उनी जीवनभर एक सन्यासीका रुपमा अरुका सेवामा सक्रिय भए । घरबारमा अल्झेनन् । मानवसेवालाई प्रमुख दक्ष्य ठाने र अहिले यो उमेरमा अनसन बसिरहेका छन् । उनलाई अनेक आरोप लगाउनेहरु एकपल्ट उनको ठाउँमा आफूलाई राखेर कल्पिनुहोस् त के सम्भव छ ?
डा केसीको अनसनको महत्व त्यतिबेलासम्म बुझ्नुहुन्न, जबसम्म बिरामी हुँदा तपाईंलाई उपचारको बिलले तर्साउँदैन । जबसम्म आफ्नो सन्तति जेहेन्दार हुँदा पनि पैसाको अभावमा एमबिबिएस पढ्नबाट वञ्चित गरिन्छ।
जब, आफ्नो सन्तान डाक्टर बन्ने लयमा लाग्न खोजदा तपाईं शुल्क हेर्नुहुनेछ, त्यसपछि भन्नुहुनेछ डा केसी यसै अनसन बसेको रहेनछ । आफूलाई नपरुन्जेल साथ दिइरहनुहोस् माफियालाई । आरोप लगाइरहनुहोस् डा केसीलाई।
हाम्रा लागि हाम्रा सन्ततिका लागि ललडिरहेको बुढो शरिरमाथि अत्याचार गर्ने सरकार अहिले आफ्नै लागेको छ । न यो सरकार दिगो हुनेछ, न तपाईंको आस्था । यो सरकारबाट पनि तिनै व्यापारीले लाभ उठाउनेछन्, भोलि तपाईंलाई नै लुट्नु उनीहरुको उद्देश्य हो।
जम्ममा ७२ किलो मिटरको परिधीमा करिब १०० ओटा अस्पताल हुँदा देशको डाँडाकाँडामा र तराईका फाँटमा आम मानिसको उपचार नपाई जीवन गुमाइरहेका छन् । या कहाको न्याय र समानता हो सरकार ? आम मानिसले बुझाएको कर हजुरहरुकै चिल्ला गाडी र रक्सी–मासुकै पैसा तिर्न हो सरकार ?
आज एक सचेत नागिरक जसले आम नागिरकहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्दै शान्तिपुर्ण तवरले आन्दोलन गर्दा सरकारले बल प्रयोग गर्नु उचित होयन । त्यसेमाथि निहत्था जनतामाथि लाठीचार्ज गरिँदैछ।
सरकारले काान खोलेर सुन्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देखाएको सपना कहिल्यै पूरा भएनन् । तर, डा केसी सत्याग्रहको महत्व आम जनताले सुनिसक्यो । त्यसैले सरकार अब गम्भीरु हुनैपर्छ । डा केसीको जीवन रक्षा गर्न छिटो भन्दा छिटो सरकारले पहलकदमी अघि बढाउनुर्छ।
सरकारले याद राखोस्, जुन देशका जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्, त्यो देशका नागरिकस स्वस्थ हुन्छन् । स्वस्थ नागरिकले मात्रै गर्न सक्छ देश विकास।
डा केसी यही मार्गमा छन् । उनको माग बुझ्ने, सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम तुरुन्त होस् । याद राख सरकार, डा केसी हार मान्दैनन्।